Faalo:Hadii Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Madaxweynanimo ? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Faalo:Hadii Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Madaxweynanimo ?
Faalo:Hadii Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Madaxweynanimo ?
La taliye sare oo ka tirsan Wasaarada Maaliyadda, horayna u ahaa Agaasimihii Warfaafinta Afartii Ra’iisul Wasaare ee ugu danabyasy.
Previous articleDhismaha cusub ee Aqalka Sare oo xariga laga jeray iyo kalfadhigoodii ugu horeeyay oo furmay
Next articleDrought Is Forcing Somali Families To Split Up Just To Survive